Warshad biyaha sifaysa oo maanta laga furay Gaalkacyo(Sawirro) – Radio Daljir
Warshad biyaha sifaysa oo maanta laga furay Gaalkacyo(Sawirro)
Maarso 6, 2013 7:24 b 0
Gaalkacyo, March 06- Waxaa maanta duleedka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo xarigga lagaga jaray shirkad cusub oo sifaysa biyaha laguna magacaabo NAJAX taasoo ay furteen dhalinyaro deegaankaa.
Munaasabad shirkaddaasi ganacsi ee biyaha sifaysa lagu daah furayay oo maanta ka dhacday xarunta shirkadda waxaa ka qayb galay duqa degmada Gaalkacyo Col. Axmed Cali Salaad Faarax,culimo iyo waxgarad kale.
Ugu horayn waxaa munaasabadda shirkadda ereyo ducco iyo dardaaran u badan ka jeediyay Sh. C/raxmaan Salaad Diirshe, shiikha ayaa dadka furtay shirkadani waxaa uu ku booriyay inay bulshada ganacsigooda iyagoo ka faa’iidaysanaya hadana ay u maraan qaab ay shareecada islaamka iyo la tacaamulka bulshada si weyn ugu wanaagsan.
Duqa degmada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad oo shirkadda xariga ka jaray ayaa tilmaamay inuu ku faraxsan yahay furitaanka shirkadan ganacsi sidoo kalana sheegay ka degmo ahaan iyo ka xukuumad ahaanba inay soo dhaweynayaan ganacsi walbaa ka hir gala deegaanada Puntland, taninna qay ay ka tahay ganacsiyada xortaa ee ay soo kordhinayaan dadka deegaanka.
Sidoo kale furitaanka shirkaddaasi ganacsi ee biyaha sifaysa ee NAJAX waxaa ka hadlay Injineero iyo qaar ka mida aasaasayaasha shirkaddaasi, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay qaababka iyo qalabka ay shirkadda ku shaqayso kuwaasoo si muuqaal ahaana loogu muujiyay ka qayb galayaasha iyo saxaafadda.
Shirkadda cusub ee biyaha sifaysa ee lagu magacaabo NAJAX ayaa qayb ka noqonaysa shirkado ganacsi oo ka hirgalayay deegaanada Puntland dhawrkii sanno ee ugu danbeeyay, waxaana taasi ay u muuqanaysa hormarka ganacsiga xortaa ee ka socda magaalooyinka waaweyn ee Puntland.
Ra’isal Wasaare Saacid oo ka duulay Caabudwaaq ( Dhegaysi)
Caawa iyo Daljir, Salaasa ,March, 5, Axmed Nuur Ibraahim ‘Somali’ ( Daljir Boosaaso ).